'Nibanjina ny masoko aho': Valkyrae dia nihetsika tamin'ny Disguised Toast miaro azy amin'ny fankahalana an-tserasera, satria manafoana ny tantara an-tsehatra - Pop-Kolontsaina
Vao haingana i Rachel 'Valkyrae' Hofstetter dia namaly ny hevitr'i Wang namana 'Disguised Toast' an'i Wang tao amin'ny renirano, izay niderany azy noho izy namana iray izay 'tsy dia miraharaha firy.'
Ny YouTuber 29 taona ary mpiara-miasa amin'ny mpangalatra 100 vao tsy ela akory izay no niaro ny Disguised Toast taorian'ny fiampangana henjana ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny pedophilia naseho taminy tao amin'ny Internet.
Manantena aho fa ireo izay naratra dia nikatona tamin'io! Heveriko fa tsara ny niresahanao azy, fantatro manokana fa nanana hatsikana mahatsikaiky ianao indraindray ary nahita ity fanehoan-kevitry ny / hafa ity nanokatra ny masoko ihany koa. Mankasitraka anao ny toast aho!
- rae ☀️ (@Valkyrae) 2 Mey 2021
Na dia nijanona ho hentitra aza izy nanoloana ny tsikera, ny fihetseham-pony dia toa nihatsara taminy rehefa niaro ny sakaizany tamin'ny fankahalana tsy mendrika izy .
Fantatra tamin'ny fizarana fifamatorana akaiky tamin'i Valkyrae, ny fanehoan-keviny vao tsy ela akory izay dia nandrisika ny valin'ity farany. Valkyrae dia namerina ilay fankasitrahana tamin'ny fomba mahasoa.
Valkyrae sy Disguised Toast finamanana dia mandresy fo hatrany amin'ny Internet
Valkyrae sy Disguised Toast no anarana roa lehibe indrindra amin'ny fandefasana ankehitriny. Nanangona kintana manaraka izy ireo nandritra ny asany tsirairay avy.
Miaraka amin'i Corpse Husband sy Sykkuno, ny quartet dia antsoin'ny mpankafy hoe 'Amigops'. Na izany aza, tara i Valkyrae, dia teo koa ny tsikera tsy mendrika.
Avy amin'ny fisintomana tsy ilaina amin'ny Addison Rae x TommyInnit Dream SMP tantara an-tsehatra noho ny fanenjehana azy noho ny fampiatratrarany ny hetsika 'Thunge CashApp' tsy misaron-tava '100 tsy nisy sarony', ny andro vitsivitsy lasa izay dia somary henjana be teo amin'ny streamer.
Na eo aza izany, vao haingana izy no naneho fisehoan-tena tsy misy fitiavan-tena tamin'ny alàlan'ny fanolorana ny fanohanana an'i Disguised Toast, izay matetika nantsoiny hoe zokiny lahy.
Ho valin'ny fiarovan-tena avy amin'ny Disguised Toast, Valkyrae dia namaly toy izao:
'Toast dia manana namana an-taonina ary naman'ny olona tsara be izy. Te-hieritreritra aho fa olona tsara aho ary namana tsara ho an'i Toast koa. Samy handray andraikitra isika rehetra. Fantatry ny rehetra fa manana vazivazy mainty i Toast, indraindray izy miampita andalana. Azoko hoe avy aiza ny olona marobe. Fa amin'ny maha-sakaizan'i Toast ahy dia azoko lazaina fa tsy anisan'ireo zavatra noresahiny sy niampangana azy izy. Manome toky azy ny namany rehetra. Mampihomehy fotsiny izany, manaiky aho. '
Nanandrana nandray andraikitra ihany koa izy noho ny zavatra hitany fa lesoka nananany ary nanambara izy fa lasa be fihetseham-po izy taorian'ny Fiderana nataon'ny Disaster Toast vao haingana :
'Izay no tsy fananako serasera eritreretiko. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latina Tsy dia miteny tsara toa ny olon-kafa aho. Enga anie ka ho tonga aho. Lesona ianarana tsara ho an'ny rehetra izany. '
'Rehefa niresaka momba ahy sy ny namany ary ny entany izy, dia nibolisatra ny masoko. Ny zavatra nolazainy momba ahy dia tena tsara ary nahatonga ahy hahatsapa fa tsy dia miraharaha loatra loatra noho izay vitako ny miteny '
Avy amin'ny fandefasana azy hafatra feno fankasitrahana avy amin'ny fo taorian'ny nandaozany ny renirano Jimmy Fallon's Among Us ny mitazona azy hatrany am-panajana hatrany, ny fisakaizan'i Valkyrae sy Disguised Toast dia tsy azo lavina fa iray amin'ireo tena mahasoa indrindra amin'ny vondrom-piarahamonina streaming ankehitriny.
Azontsika atao ve ny mankasitraka ny finamanana eo amin'ny toast sy Rae matetika, tsy dia voamariky ny maro ary mila jerena, eo foana ny fifandraisan'izy ireo, mpinamana be ry zareo, mitovy izy ireo, mitovy ny angovo ananany, mijery izy ireo ho an'ny tsirairay, mifampiaro
- LUMINARAE brooke☀️🦇🩸 (@_AngelsHA_) 17 aprily 2021
Ny fiainan'ny streamer dia azo antoka fa tsy cakewalk, satria tonga miaraka amin'ny tombony sy ny lafy tsarany.
Na dia eo aza ny fiaretana ny habaky ny habaka amin'ny Internet misy poizina indraindray, Valkyrae sy Disguised Toast dia azo antoka fa mahazo fampiononana satria toa mifampiankina foana izy ireo.
ny fomba tsy ho tonga matanjaka be
tsy afaka mahita ny sipako mihitsy aho
rehefa tia olona ianao fa tsy tia anao
fa maninona no mitranga amiko izao zava-dratsy rehetra izao
ny fomba fitiavana ny lehilahy
ny fomba fandraisana andraikitra amin'ny fiainanao